Fanavaozana ny AirTags. Atorinay anao ny fomba hahitana raha havaozina ny anao | Avy amin'ny mac aho
Fanavaozana ny AirTags. Atorinay anao ny fomba hahitana raha toa ka maharaka ny daty misy anao
Ny orinasa Cupertino dia nanangana fanavaozana ny rindrambaiko ora vitsy lasa izay izay nanatanterahana fanatsarana ny fiainana manokana. Araka ny efa fantatrareo dia manavao ho azy ireo fitaovana ireo ny mpampiasa dia tsy mila mandray fepetra handray io fanavaozana ny firmware io.
Ankehitriny ny fanontaniana apetraky ny mpampiasa maro dia ny hoe nahazo ny fanavaozana mifanaraka amin'izany ve ny AirTag na AirTags azy ireo. Ny kinova vaovao an'ny fananganana lozisialy AirTag izay naparitaka ho azy, laharana 1A276d ary ny firmware firmware 1.0.276 ka anio dia hasehontsika anao ny fomba hijerena raha toa ka vaovao ny fitaovana ampiasainao misy.
Ahoana ny fomba hijerena raha havaozina ny AirTag antsika?
Mety ho sarotra ny asa nefa tsy misy zava-misy lavitra amin'ity tranga ity fa tsy maintsy mampiasa ny iPhone ho azy isika ary hasehonay anao ny fomba hanaovana azy. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mampiditra ny rindranasa Search. Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny rindranasa Search ao amin'ny farany ambany izahay dia mahita menus maromaro ary mila manindry ny «Objects» isika. Raha vao tsindrio fotsiny tsy maintsy mikasika ny anarana nomentsika ny AirTag isika ary eo indray dia hikitika ilay anarana isika Eo an-tampony dia ho hitanao ny fisehon'ny laharana serial sy ny firmware an'ny AirTag anao.
Amin'ny tranga manokana, azoko atao ny milaza fa amin'izao fotoana izao dia tsy tonga aty amiko ny fanavaozana, eo amin'ny 1.0.225 aho ary antenaiko fa havaozina ao anatin'ny ora vitsivitsy ity. Ny fanatsarana dia misy koa ny fanitsiana ny halavan'ny fotoana aelin'ny AirTags hilalaovana ny fampandrenesana heno rehefa avy nitokana avy amin'ny tompony ankoatry ny fanatsarana ny fiainana manokana. Etsy ankilany, ny orinasa Cupertino dia nanamafy fa miasa amina rindranasa Android iray izay hahita ny AirTags sy ny kojakoja hafa azo ampiasaina amin'ny «Fikarohana». Nohavaozina ve ny AirTag anao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Fanavaozana ny AirTags. Atorinay anao ny fomba hahitana raha toa ka maharaka ny daty misy anao
Androany ny andiany fahitalavitra Apple TV premieres + Lisey's Story